Afrika, 31 December 2014
Arbaco 31 December 2014
Pentagon-ka oo Xaqiijiyay Dilka Cabdishakur Tahliil
Wasaarrada Gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon-ka ayaa xaqiijisay goor dhwoayd in Maraykanku uu duqayn cirka ah ku dilay Taliyihii sirdoonka iyo amniyaatka ee Al-Shabab Cabdishakur Tahliil.
Dawladda Soomaaliya oo La Wareegtay Zakariye Ismaaciil
Zakariye Ismaaciil Xirsi oo hore uga tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka al-Shabab ayaa galabta si buuxda ay ula wareegtay dawladda Soomaaliya.
Dawladda oo Xaqiijisay Dilka Taliye Ka Tirsan Al-Shabab
Dawladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay goor dhowayd soo saartay ku xaqiijisay in la dilay taliye sare oo ka tirsan ururka al-Shabab kadib duqayn Maraykanku shalay ka gaysteen Saakow.
Dawladda Iyo Mucaaradka Jabuuti oo Heshiis Gaadhay
Dawladda iyo mucaaradka Jabuuti ayaa maanta heshiis kala saxiixday kadib wadahadallo muddo soo socday, sidaasina waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Dawladda Kenya oo La Wareegtay Sakariye Ismaaciil Xirsi
Wararka ka imanaya magaalada Ceel Waaq ayaa sheegaya in diyaarad milatari oo ay leedahay dawladda Kenya lagu qaaday Sakariye Ismaaciil Xirsi oo hore uga tirsanaa Al-Shabab maalintii Sabtidana lagu qabtay Ceel Waaq.
Barnaamijyo: Dhacdooyinkii 2014
VOA waxay idin soo gudbinaysaa saddex barnaamij oo ka hadlaya dhacdoyinii ugu waa weynaa caalamka, Soomaaliya iyo waliba ciyaaraha.
Mas'uuliyiinta Soomaalida ee Gobolka Gedo ayaa sheegay inay qabteen sarkaal ka tirsan ururka al-Shabab. Sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa Zakariye Ismaaciil Xirsi.
Tunisa: Essebsi oo la Soo Doortay
Siyaasaga rug caddaaga ah ee Beji Caid Essebsi ayaa ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee Tunisa.
Muran ka Taagan Doorashada Tunisia
Dadweyanaha dalka Tunisa ayaa ka war sugaya natiijada doorashada madaxnimada ee dalkaasi.
U. Kenyatta oo Saxeexay Heshiiskii Amniga
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxeexay sharci dhinaca amniga oo xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi ay shaley ka doodeen, buuqna ka dhashay. Sharcigan ayaa Mr. Kenyatta sheegay inuu kaalin ka geysan doono sugidda amniga.
Baarlamanka Kenya oo Ansixiyay Sharciga Amniga
Baarlamaanka Kenya ayaa ansixiyay sharciyga cusub ee Amniga oo ah sharci lagula dagaallamayo argagixisada. Kulanka maanta ee sharcigan lagu ansixiyay ayaa waxaa ka dhacay buuq ay xildhibaannada mucaaradku sameeyeen.